How to CreateaGmail Account | IT4U - Training Hub
Mon - Fri : 09:00 - 17:30, Sat 09:00 - 15:30
Mon, 12/04/2017 - 11:19 /0Comments
Google Account တစ်ခုသည် အများအပြားသော Google ၏ အခမဲ့ ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု၊ များကိုသုံးစွဲခွင့်ရရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ Google Account တစ်ခု Sign Up (မှတ်ပုံတင်ခြင်း) သည်လွယ်ကူလျင်မြန်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်အချို့ကို ထုတ်ပေးရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည် Google ထံမှထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအများဆုံးရယူရန် အောက်ပါလမ်းညွှန်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
1 မည်သည့် Google ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုမဆိုဖွင့်လိုက်ပါ။ (ဥပမာ။ ။ http://mail.google.com သို့ဝင်ရောက်ပါ။) ဤသည်မှာ Google Gmail, Google+, Google Drive အစရှိသဖြင့်ပါဝင်သည်။ အနီရောင် “Sign In” Button ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် အနီရောင် “Sign Up” Button ကိုနှိပ်ပါ။ “Createanew Google Account” page သို့ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်။
Button များသည် Google ဝန်ဆောင်မှုပေါ် မူတည်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Gmail တွင် "Create an Account" Button အစား "Sign Up” Button ကိုတွေ့ရှိရပါလိမ့်မည်။
2 Username (အသုံးပြုသူ Address အမည်) ထည့်သွင်းရမည့်အဆင့် သို့ရောက်ရှိလာပါမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သင်၏ Username သည် သင်၏ Gmail Account အမည်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ Username Field အောက်ကို Click နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်အသုံးပြုသော အမည်နှင့်လက်ရှိတည်ရှိနေသော Gmail Account ရှိမရှိ အကြောင်းပြန်ပါလိမ့်မည်။ ရှိနေပါက ထိုအမည်နှင့်မတူစေရန် အမည်အသစ်တစ်ခုပေးပါ။
သင်၏ အသုံးပြုသူအမည်မရရှိနိုင်လျှင် သင်၏ Username နှင့်ဆက်စပ်သောရွေးချယ်စရာပေးထားပါလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသော အမည်ကိုပေးရန်ကြိုးစားပါ။
3 သင်၏ကျန်ရှိနေသေးသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ သင်၏ ပထမအမည်၊ နောက်ဆုံးအမည်၊ သင်၏ မွေးနေ့ ၊ သင်၏ လိင်အမျိုးအစား၊ အကယ်၍ သင်၏ Account ပျောက်ပျက်သွားခဲ့ပါက ပြန်လည် ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ဖုန်းနံပါတ် နှင့် အီးမေးလ် လိပ်စာတို့ကိုထည့်သွင်းရပါမည်။ ထို့အပြင်သင်နေထိုင်သော နိုင်ငံကိုပါတစ်ပါတည်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနံပါတ်ပေးခြင်းကို လည်းအကြံပြုပါသည်။ သို့သော် မဖြစ်မနေထည့်သွင်းရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။
4 CAPTCHA ​ဖြည့်​စွက်ပါ။ ထိုအရာသည် တ​ကယ့်​လူ​တစ်​ဦး​အ​ကောင့်​ဖန်​တီး​ခြင်း​ ​သေ​ချာ​ကြောင်း ​စီ​စစ်​အ​တည်​ပြု​သော ကိ​ရိ​ယာ​တ​ခု​ဖြစ်​ပါသည်။ ​သင်​က​မဖတ်​နိုင်​လျှင် ​အ​သစ်​တစ်​ခု​တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ အသစ်တစ်ခုကိုတောင်းဆိုရန် စာသားဘေးမှ Refresh Button ​ကို Click ​ပါ။ သို့​မ​ဟုတ်​ပါ​က​သင့်​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို​စ​ပီ​ကာ​က​တ​ဆင့်​အ​သံ​ကျယ်​ဖတ်​ကြား​နိုင်ရန် ​စ​ပီ​ကာ​ခ​လုတ်​ကို​ Click ​နှိပ်​ပါ​။
5 သင်သည် Google ၏ Privacy မူဝါဒကို သဘောတူညီလျှင် အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ ​​Google ၏ Privacy​ မူ​ဝါ​ဒကို ​ဖတ်​ဖို့​အ​ချိန်​ယူ​ပါ။ ​
6 နောက်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းရန် ”Next step” ကိုနှိပ်ပါ။ ဤအဆင့်သည် သင့်အား Google + Profile သို့ခေါ်ဆောင်သွားမည့်အဆင့်ဖြစ်သည်။ Google Account များအားလုံး တည်ဆောက်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် Google + Account ကိုပါတစ်ပါတည်း တည်ဆောက်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏ Account သို့ သင်၏ ဓာတ်ပုံတင်မည်လား? မတင်ဘူးလား? ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။